Ilay RADOn’IZAO TONTOLO IZAO | GAZETY_ADALADALA
Filed under: fiaraha-monina, olo-manga, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: ANDRIAMANANTENA Georges, fahafatesana, Georges ANDRIAMANANTENA, olo-manga, RADO, tononkalo |
« RONONO MAMONO, TANDREMO BARCAMP MADAGASCAR 2008 »
tahina, on 23/09/2008 at 8:41 said:
Hita ho nisy fahabangana tokoa ny tonton’ny asa-soratra fony lasa i RADO ka isaorana indrindra izy na dia efa nody mandry aza fa tsy hay hadinoina ny zavatra navelana zay tsy ho ary ho voatanisa fa dia rakitra tsy mety maty ato am-po
Nirina, on 24/09/2008 at 7:26 said:
Mitady ny fomba azona miantso ny fianakavian’i RADO ny tenako.
Mitsaoka ilay poeta | Hommages à un poète | Saluting a poet | Rado « Blog Archive « malagasy, on 04/10/2008 at 2:38 said:
[…] avyalavitra – Ilay Rado-n’izao tontolo izao >> […]
RAJERISON, on 07/10/2008 at 3:16 said:
Tena Rado araka ny anarany
Rado koa ny tantarany
Ho an’ny Malagasy zanany
Toa kisendrasendra ihany….
Amy RANAIVOMAHEFA, on 06/04/2009 at 5:40 said:
fa naninona ary no tsy nisy ny fisaonam-pirenena ho an’ny olona mendrika izany? i Rado… olomanga, radon’izao tontolo izao.
RAKOTONANAHARY Louis Norbert, on 21/06/2009 at 8:58 said:
Androany aho vao nahare ny fahalasànan’i Rado. Misaotra an’Andriamanitra aho nanome antsika izany olomanga sy lehilahy manantalenta, izay namela zava-tsoa be dia be ho an’ny taranaka malagasy mifandimby izany. Misaotra indrindra an’i Rado aho tamin’ireo tononkalo sy tononkira izay noforoniny (« Mba tantanonao ry Raiko », « N’inon’inona hitranga Jeso »,…). Ho an’Andriamanitra irery anie ny dera, ny haja sy ny voninahitra, ary ho an’ireo ankohonany sy fianakaviany kosa ny fahasoavany sy famindrampony.
RAKOTONANAHARY Tahirisoa Ravakiniaina, on 26/11/2009 at 1:08 said:
Tsy hay ny tsy hisento sy tsy hiondrika aty an-tany lavitra aty isaky ny mahare ny fahalasanan’olo-manga malagasy toy izao fandaozan’i Rado antsika izao.
Mahatsiaro ho kamboty ara-tsaina sy ara-panahy ny tena,mitamberina ao an-tsaina ny fotoana fohy nihaonana sy nifanakalozan-kevitra aryy nifanakalozana tononkalo taminy efa ho 15 taona lasa tany ho any angamba izao, fony mbola tany an-tanindrazana.
Iriko ny hanana fifandraisana amin’ireo fianakaviany na solon-tena na taranany raha azo atao.
ony rambelo, on 15/10/2010 at 7:22 said:
Azo hantenaina ve izay lazainy ?
“Vita soa ity ny fifanarahana teto Maputo ka dia hody amin’izay isika. Halevintsika ny Répoblika fahatelo ary hiroso amin’ny tetezamita amin’izay ny vahoaka Malagasy…Ity fifanarahana teto Ivato ity dia manankery avy hatrany raha vantany vao vitantsika ity sonia ity, koa hiroso isika ho amin’ny fanatanterahana azy”.
Tsy noterena na novozonana ny olona niteny ireo resaka ireo. Ary dia mandraka ity ny anio dia indreo koa misy andian’olona manery “azy” hanantanteraka izay nolazainy sy nosoniaviny. Tanteraho ny Maputo, hoy ny sasany. Ampiharo ny Dinan’Ivato, hoy ny hafa, fa tsy izy ireny fanendrena natao vao haingana ireny. Mandeha indray amin’izao fotoana ny resaka fifidiana sy fitsapan-kevi-bahoaka. Dia tonga ihany koa ny tsy fitoviam-pijery marobe mitranga etsy sy eroa. Tsy hay intsony hoe: “Iza no miaro ny tombotsoan’iza? Vondron’olona toy ny inona no mahasolo tena ny aiza? Iza no hanantanteraka ireo fitakiana marobe etsy sy eroa. Misy mpisandoka e! Misy misoloky e! Misy fetsifetsy e! “. Izany no pôlitika gasy e! Pôlitikam-pisolokiana sy fivadiham-pitokisana.
Fifidianana no vaha-olana
Tsy maintsy haverina any amin’ny vahoaka ny fahefana, ary fifidianana no handaminana izao korontana politika izao. Fa iza no namporisika izay olona mpiteny izany hisoloky ny fahefam-bahoaka? Rehefa avy nangalarina sy novetavetaina ary nohitsakitsahina dia haverina any amin’ny tompony? Raha “mpangalatra sy mpisoloky” ve dia azo antoka fa hiova fo sy azo hinoana ho manana finiavana hitantana tsy mitongilana? Hoy ny poeta Rado izay: Tsy ny vola na harena no halako, fa ny fomba hahatongavana amin’izany no tsy tiako. Azo antoka fa tsy misy mpanao politika handà fifidianana. Ny olana eto amintsika anefa dia ny olom-boafidy hatrany no haongana, tsinotsinoavina. Tsy mahagaga raha misy hatrany ny fanehoan-kevitra mifanohitra amin’izay heverin’ny Mpitondra Avo ankehitriny. Vao notendrena ny andian’olona marobe nolazaina fa ho mpamolavola lalàna. Koa nahoana no mbola misy didy hitsivolana mivoaka amin’ny alalan’ny filankevitry ny minisitra ihany? Didy hitsivolana mitaona ny olompirenena hifidy ny ben’ny tanàna sy ny pitsopitsony mahakasika izany. Io resaka mandeha ila sy fitantana ny firenena amin’ny didy hitsivolana fotsiny io no tena olana eto, ary tokony hanatanterahana ny fifidianana. Kanefa tokony ho fifidianana eken’ny ampahany betsaka amin’ny olompirenenena, dieny ety ampihandohana ka hatrany amin’ny famoahana ny vokatra.
Tao anaty filankevitry ny governemanta dia voalaza sy nolazaina ireo tombotsoa marobe mety ho azon’ny andian’olona notendrena ho mpanao lalàn’ny Fitondrana Avo. Ary efa niseho an-gazety izany, sady efa nohamafisin’ny minisitry ny vola fa efa ao anatin’ny teti-bolam-panjakana rahateo. Ny mahatalanjona anefa, ary tsy miherina akory ny andro, dia ny Praiminisitra tenany mihitsy no milaza fa tsy manambola ny fitondrana, ary mampihatra ny politikam-pitsitsiana, ka tsy mahavita hanefa izany tombotsoa izany; Ireo olona notendrena ireo dia aleo handeha sarety, sy handeha an-tongotra fa tsy misy ny fiara ho azon’izy ireo. Tsy resaka tombotsoa akory no fenitra hotakian’ny mpanao politika gasy(sanatria?) fa mitondra ny hevi-bahoaka izy ireo (araka ny filazan’izy rehetra). Fa ny olana dia ilay fitapitaka madinidinika sy ny tetika fisolokiana ny fahefam-bahoaka. Midrikina ihany koa manko etsy andaniny ireo Ben’ny tanàna marobe, nivory teny Atsimon-drano teny, mikasika ny môtô sy ny vola tapany faharoa tokony ho azon’ireny kaominina ireny. Tonga hatrany amin’ny fitsipahana ny fanantanterahana ny fifidiana ben’ny tanàna ny resaka tao.
Mbola hitohy ny korotandrotana raha tsy ho faranana ny fisavoritahana. Moa tsy olan’ny fitantanana kaominina no niteraka ny savoritaka tany Toamasina tany? Raha mbola tsy hifanarahana ny fitsipi-dalao dia hisy hitsipakahatrany ny endriny, ny vokany, ny lanjany. Tsy maintsy pasohina sy ifanarahan’ny mpifaninana rehetra ny daomy, rehefa hanomboka. Tsy ho marina ny kilalao hatao raha hisy efa mahafantatra mialoha ny vatony. Dia tsy maintsy ho hita eo izay ho vita matavy sy ho tratran’ny ozon-daomy. Sa efa misy mihevi-tena fa tsy maitsy mandresy avy hatrany? Azafady, tsy maintsy hampandresena no tena tiana ho tenenina.
gazetyavylavitra, on 15/10/2010 at 7:32 said:
Navoakako ihany ity fanamarihana ity, Ony R., na dia hita mibaribary aza fa diso toerana ny nametrahana azy. Tokony ho any amina lahatsoratra miresaka politika izy ity no nosoratana
LALAINA JACKX, on 09/05/2014 at 8:20 said:
Mpanoratra mahay i RADO.Je t’aime RADO
Rabeharivony, on 17/11/2014 at 5:54 said:
Zah aloa d isan mpankafy asa soratra Malagasy(tononkalo,tantara foronina,sombin-tantara…). Ary zvtr maàlína ah ndrindr n sera2 toa itony mb aàlalàna bebe kokoa n tena kantotsika! Ary misaotra btsk anarw zay mandray anjar ato f tena zava-deíbe u anay f sad fitaizana ian koa n toy izao! Saing mial tsiny ra manohina n fmb fanoratro f mb aítsio r tmpk ra sitrakarw! D taizao aho f mb t anume aina ilay talenta kel ao anatk ao! Veloma tmpk, mandrapresak.
ROMUALD, on 06/03/2015 at 2:41 said:
Marina izany,raha te hampitombo ny talentanao ianao dia tazony aloha ny maha-malagasy:tsy ahitana u na w ny litera malagasy tompoko,misaotra indrindra